Holland: Wilders oo maxkamad la soo taagay | Somaliska
Ninka cunsuriga ah ee ka tirsan baarlamaanka Holland ee lagu magacaabo Geert Wilders ayaa markale maxkamad la soo taagay asagoo lagu haysto in uu faafiyay naceyb ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta qaasatan dadka ka soo jeeda Maroko. Gilders ayaa ku dooday in laga soo horjeedo fikirkiisa siyaasadeed. Wilders ayaa u sheegay xaakimada maxkamada in uu asaga yahay midka laga galay dambiga asagoo ka codsaday in meesha laga saaro maxkamadeyntiisa. Wilders ayaa sheegay muwaadiniinta wax ka sheega Islaamka in ay soo wajahdo maxkamadayn iyo hanjabaad dil asagoo sheegay in arintaas ay tahay mida loo baahanyahay in wax laga qabto. Ninkaan ayaa Quraanka la barbar dhigay buugii Hitler asagoo Islaamka ku aflagaadeeyay hadalo xunxun. Haddii dambiga lagu helo ayaa la ganaaxi doonaa lacag dhan 10,000 Dollar ama 1 sano oo xarig ah. Si kastaba ha ahaatee xisbigiisa Freedom Party ayaa ah kan 3-aad ee ugu weyn Holland asagoo xulufo la ah xisbiga talada haya. Wilders ayaa caan ku noqday neceybkiisa Islaamka asagoo tusaale u ah xisbiyo badan oo cunsuriyiin ah sida xisbiga Sverige Demokraterna (SD) ee ka dhisan Sweden. "Yurub mugdi ayay sii galeysaa, sababtuna waa Islaamka. Diinta saxaraha ka timid waxay kaliya oo abuuri kartaa saxare" ayuu u sheegay maxkamada. Wilders ayaa hada ka hor soo saaray filim uu ku aflagaadeynayo Islaamka oo ugu magacdaray Fitna asagoo waqtigaas ka dib ku nool dhuumasho iyo ilaalinta booliska. Saciid Cabdi Cusmaan, Uppsala
Ninka cunsuriga ah ee ka tirsan baarlamaanka Holland ee lagu magacaabo Geert Wilders ayaa markale maxkamad la soo taagay asagoo lagu haysto in uu faafiyay naceyb ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta qaasatan dadka ka soo jeeda Maroko. Gilders ayaa ku dooday in laga soo horjeedo fikirkiisa siyaasadeed.
Wilders ayaa u sheegay xaakimada maxkamada in uu asaga yahay midka laga galay dambiga asagoo ka codsaday in meesha laga saaro maxkamadeyntiisa. Wilders ayaa sheegay muwaadiniinta wax ka sheega Islaamka in ay soo wajahdo maxkamadayn iyo hanjabaad dil asagoo sheegay in arintaas ay tahay mida loo baahanyahay in wax laga qabto.
Ninkaan ayaa Quraanka la barbar dhigay buugii Hitler asagoo Islaamka ku aflagaadeeyay hadalo xunxun. Haddii dambiga lagu helo ayaa la ganaaxi doonaa lacag dhan 10,000 Dollar ama 1 sano oo xarig ah.
Si kastaba ha ahaatee xisbigiisa Freedom Party ayaa ah kan 3-aad ee ugu weyn Holland asagoo xulufo la ah xisbiga talada haya. Wilders ayaa caan ku noqday neceybkiisa Islaamka asagoo tusaale u ah xisbiyo badan oo cunsuriyiin ah sida xisbiga Sverige Demokraterna (SD) ee ka dhisan Sweden.
“Yurub mugdi ayay sii galeysaa, sababtuna waa Islaamka. Diinta saxaraha ka timid waxay kaliya oo abuuri kartaa saxare” ayuu u sheegay maxkamada. Wilders ayaa hada ka hor soo saaray filim uu ku aflagaadeynayo Islaamka oo ugu magacdaray Fitna asagoo waqtigaas ka dib ku nool dhuumasho iyo ilaalinta booliska.
Kasoo kale iyo shayaadintaba alaa inagaga filan xasbunalahu wa nicmal wakiil
alan kamegan galnay alhga naga qabtro yahuuda alow ada wen ee nonatoariiso ilaheyo wadan ken nabad nogadhig ilahey hanga qabr diinta islank dina ahen majirto ilheyo islamka kor kadgig
yahuud iyo nijaasa alha nagqabto yarabi ilaho